Faahfaahin: Diyaarad rakaab ah oo ay ciidamda Itoobiya ku soo rideen Soomaaliya ‘sawirro’ | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Faahfaahin: Diyaarad rakaab ah oo ay ciidamda Itoobiya ku soo rideen Soomaaliya...
Faahfaahin: Diyaarad rakaab ah oo ay ciidamda Itoobiya ku soo rideen Soomaaliya ‘sawirro’
Xorriya Online: Waxay faahfaahin dheeraad ka soo baxaysaa diyaarad shalay meel u dhow garoonka diyaaradaha magaalada Bardaale ee gobolka Baay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ku soo dhacaday, taas oo sababtay dhimasho.
Diyaaraddaan oo nuuceedu ahaa kuwa yaryar ee xamuulka oo ay laheyd shirkadda shirkadda diyaaradaha Afarican Express ayaa ka soo duushay magaalada Baydhabo, waxeyna daawooyin iyo qalab caafimaad u sidday magaalada Bardaale ee ka tirsan isla gobolka Baay. Xamuulka saarnaa diyaaradda ayaa waxaa la sheegay in ay laheyd hey’adda ICRC.
Dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda ayaa ku geeriyooday shilkaas. Waxaa saarnaa lix qof oo kala ahaa, duuliyihii diyaaradda, duuliye ku xigeenkii, duuliye tababar qaadanayey, injineerkii diyaaradda, iyo labo qof oo shaqaale ahaa.
Diyaaradda ayaa markey soo dhaceysay ku duulaysay joog hoose, waxaana lagu qiyaasay in ay dhulka u jirtay ilaa 670 mitir.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegayo in ciidama Itoobiya ee ku sugan garoonka ay la beegsadeen diyaaradda gantaal, kaas oo ku dhacay baalka diyaaradda. qoriga loo adeegsadey soo ridista diyaaradda ayaa ahaa Baasuuke ama RPG.
Mas’uuliyiin ka tirsan shirkadda African Express ayaa sheegay inay u badan tahay in diyaarada gantaal lagu dhuftay kaas oo sababtay burburka diyaaradda.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Ibbi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Ibbi oo ka mid ah mas’uuliyiinta iyo milkiilayaasha diyaaradda ayaa sheegay in shan qof ay ku dhinteen shilka diyaaradda oo labo ka mid ah ay ahaayeen duuliyeyaasha diyaarada, wakiilkii xamuulka siday iyo wakiilka shirkadda.
Waxuu xildhibaanka soo bandhigay sawir laga qaaday satelite, kaas oo muujinaya in diyaarada wax lagu dhuftay, xilli diyaaradda 5-KM u jirtay dhabbaha ay diyaaradaha ku soo dagaan..
Goobta ay diyaaradda ku dhacday ayaa laga arkayey holac iyo qiiq faro badan. Sidoo kale, baraha bulshada ayaa la soo dhigay muuqaalo iyo sawirro muujinayo sida uu ahaa xaalka iyo jawiga goobta ay diyaaradda ku burburtay.
Dhacdadaan ayaa kayaabisay dadka Soomaaliyeed, waxeyna noqoneysaa markii ugu horreysay inta la ogyahay oo ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM diyaarad ka rakaab ah si bareer ay u soo ridaan.
War saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Gaadiidka Duulista iyo Hawada dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradaas ay aheyd nooca 120, ayna leedahay Shirkadda Africaan Express.
Wasaaradda ayaa sheegtay in ay durbo bilowday baaritaano ku aadan sababta ka dambeysay in diyaaradda soo dhacdo, waxeyna balan qaaday in si deg deg ah natiijada baaritaan ay u soo dhandhigi doonto.
Dowladda Soomaaliya ayaa tacsi u dirtay qoysaskii, eheladii iyo asxaabta laga geeriyooday.
Hoos ka akhriso warsaxafadeedka dowladda soo saartay.
Xorriya.com kala soco warar iyo warbixinno xaqiiq ah